उपत्यकामा मासुको मूल्य निर्धारण, कुन मासुको मूल्य कति ? - अनलाइन डिजिटल समाचार : Shreepage TV
उपत्यकामा मासुको मूल्य निर्धारण, कुन मासुको मूल्य कति ?
२१ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा एक वर्षका लागि तयारी मासुको बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
सरकार र व्यवसायीहरुबीचको आपसी सहमतिमा एक वर्षका लागि विभिन्न प्रकारका मासुको अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओमा २० लाख लगानीकर्ताको हात खाली
माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन जीएमआरलाई थप दुई वर्ष समय दिने तयारी